मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउदै हुनुहुन्छ? सावधान! हिरासतमा बस्नुपर्ला - Pahilo Click
मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउदै हुनुहुन्छ? सावधान! हिरासतमा बस्नुपर्ला
धादिङ: मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा सडक दुर्घटना रोक्न सो निर्णय गरेको जनाएको छ । मङ्गलबार ढोलामण्डलीबाट फर्किँदै गरेको आइचर ट्रक पल्टिँदा सात जनाको अकालमा मृत्यु तथा ३२ भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
सिटभन्दा बढी यात्रु चढाउने तथा मालबहाक सवारीले यात्रु चढाउने गरेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरी कारवाही गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले भन्नुभयो, “सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएमा सवारी चालकलाई अबदेखि जरिवाना होइन, हिरासतमा राखेर कारवाही गर्नेछौ ।”
जिल्लाको प्रमुख तीर्थस्थल ढोलामण्डलीलाई सभ्य बनाउने, मण्डली क्षेत्रमा मदिरा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने सहमति गरिएको छ । बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, यातायात व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
खाद्यमा जिउँदो खसीबोकाको प्रतिकिलो रु ५६०
मन्त्रिपरिषद्‍मा थपिए तीन नयाँ अनुहार, रक्षामन्त्री पोखरेलको जिम्मेवारी खोसियो, उपप्रधानमन्त्रीमा मात्रै सीमित
यस वर्ष हालसम्मकै उच्च १ खर्ब ३७ अर्ब बढीको धान उत्पादन हुने
ओडिआईको एउटै खेलमा धेरै विकेट लिने पहिलो नेपाली बने सन्दीप
बसाइँ सर्दै हुनुहुन्छ? तेह्रथुमको छथर जानुहोस, पाँच लाखसम्म अनुदान पाउने
प्रम ओलीले गरे गौतमबुद्ध विमानस्थलको अवलोकन, निर्माणलाई थप गति दिन निर्देशन